Maine Coon | Noti saka
Raha mitady saka an-trano mahafinaritra sy be fitiavana ianao izay lehibe kokoa noho ny eoropeanina mahazatra ary toa liona kely, dia tsy mangataka ny tsy azo atao. Misy karazany iray izay mahafeno izay rehetra angatahinao, ary izany no saka Maine Coon.
Miaraka amin'ny lanjany hatramin'ny 11kg (ny lahy), ity volom-borona sarobidy ity dia manana endrika izay hahatonga ny fianakaviana iray manontolo ho tia, na ankizy, na antitra na olon-dehibe.
1 Ny niandohana sy ny tantaran'ny Maine Coon
2.1 Lokon'ny hazakazaka
2.1.1 Coon mainty mainty
2.1.3 Maine Coon volondavenona
3 Inona ny toetrany?
4 Fikarakarana inona no ilaina?
5 Ohatrinona ny vidin'ny Maine Coon?
Ny niandohana sy ny tantaran'ny Maine Coon
The Maine Coon, ilay goavambe saka, Karazana teratany Etazonia izy io, manokana avy any Maine. Fa ny marina dia tsy fantany tsara ny tantarany, satria misy teôria maro momba an'io, ny sasany lojika kokoa noho ny hafa:
Misy angano miverina amin'ny 1793, izay mitantara ny kapiteny Samuel Clough, teratany Wiscasset (Maine), izay nitondra ny valizin'ny Mpanjakavavy Marie Antoinette tao Sally, izay nahitana saka.
Misy tantara iray izay milaza fa ny Vikings no tonga voalohany tany Amerika, ary niaraka tamin'izy ireo ny saka izay hitazona ny biby mpikiky.
Ny teôzika mirindra indrindra dia milaza fa fiampitana eo amin'ny saka lava volo (toy ny angora) sy ny saka dia amerikana.
Na izany aza, tamin'ny 1953 ny Central Maine Coon Cat Club dia noforonina tao Maine, izay hanomezana laza ny iray amin'ireo saka saka eto an-tany manintona indrindra eto an-tany.
Raha ny filazan'ny Federasiona Feline Iraisampirenena dia tokony hanana:
lanja: eo anelanelan'ny 6,8 sy 11kg ho an'ny lahy ary eo anelanelan'ny 4,5 sy 6,8kg ho an'ny vavy.
vatana: lava sy hozatra rakotra volo fohy amin'ny loha fa lava kokoa kosa rehefa manakaiky ny rambony.
lohany: salantsalany, miaraka amin'ny takolaka malaza.
salohim-bary: lava sy maranitra.
maso: lehibe sy boribory lavalava, misy loko hafa raha tsy manga raha tsy Maine Coon fotsy.
Na dia ekena aza ny loko rehetra (ankoatry ny colorpoint, sôkôla, kanelina, lilac ary fawn) tato anatin'ny taona vitsivitsy dia misy fangatahana bebe kokoa ho an'ny vitsivitsy manokana. Ary tsy natao ho an'ny kely kokoa: ny lokon'ny volony dia tena tsara tarehy. Ireto ve:
Coon mainty mainty
Sary - InspirationSeek.com
Raha te hanana pantera mainty kely misy volo somary lavalava ianao dia azo antoka fa io no namanao akaiky indrindra.
Raha mifanohitra amin'izany no tadiavinao hanana volony fotsy fotsy, io no volonao 🙂.
Maine Coon volondavenona
Ny volondavenona dia loko marevaka tena tsara, izay manome endrika misitery sy manaitra ny vava.
Ny brindle no lamina tranainy indrindra. Mety ho brindle volondavenona na volomboasary.
Inona ny toetrany?
Ity saka saka ity dia fantatra ho mahafatifaty sy be fitiavana. Ankafiziny ny miaraka amin'ny fianakavian'olombelona, ​​na mijery fahitalavitra na milalao kely. Amin'io lafiny io dia mazàna dia saka milamina tokoa izy io, na dia mety manana, toa ny lesoka hafa aza, ny "fotoanan'ny hadalany" izay manomboka mihazakazaka manodidina ny trano na milalao rano.
Izany koa dia, tena tia fiaraha-monina, hany ka somary mora ny mampifanaraka azy amin'ny biby hafa, toy ny alika. Fa raha te ho sambatra izy dia mila ampianarina hanao tadidy ary fiadiana, satria tiany ny mandeha mitsangatsangana (eny, amin'ny toerana mangina foana). Amin'ny Ity lahatsoratra ity Manazava ny fomba ahazoana azy izahay.
Fikarakarana inona no ilaina?
Ny Maine Coon dia tsy maintsy mahazo andiana fikolokoloana isan'andro mba hahazoana antoka ny fahasalamany sy ny fahasambarany. Ireto misy toy izao:
Ny ankasitrahana indrindra omeo ny fahana avo lenta na misafidy sakafo voajanahary kokoa toy ny Yum, Summum na Barf Diet. Raha misafidy ny farany ianao, dia manoro hevitra anao izahay hangataka fanampiana amin'ny mpitsabo aretin-tsaina mivelona amin'ny sakafon-kanina, satria ny fanaovana izany tsy mety dia hampidi-doza ny fahasalaman'ny biby
Voasasa indroa isan'andro ny volon'izy ireo mandritra ny vanim-potoana fandorana, ary indray mandeha isan'andro ny sisa amin'ny taona. Borosy borosy henjana no azo ampiasaina amin'izany, ary ny FURminator, izay hanala ny volo maty rehetra.
Indray mandeha isan-kerinandro ny sofina dia tokony diovina amin'ny lamba famaohana madio (iray isaky ny sofina) mandena amin'ny rano mafana, nefa tsy miditra lalina.
Roa na intelo isan-kerinandro dia tokony diovina amin'ny fofona madio (ny iray isaky ny maso) ny maso, lena amin'ny fampidirana chamomile. Amin'izany fomba izany, ankoatry ny fanadiovana azy ireo dia hihena ny risika amin'ny aretina.
Na dia handany 16 na 18 ora matory aza ianao, rehefa mifoha dia te-hilalao, hifindra, hihazakazaka. Tsy vitan'ny hoe mila mitazona fahasalamana fotsiny ianao, fa tena ilaina koa ny manao izany mba hampihenana ny mety ho ketrakao.
Noho izany antony izany, isan'andro dia mila mandany fotoana isan'andro ianao ary milalao miaraka aminy, mampiasa misy kilalao saka izay azo amidy amin'ny fivarotana biby fiompy, toy ny biby tototry, baolina na tehina.
Mety ho toa lojika izany, saingy nieritreritra aho fa mety ny manampy azy satria indraindray dia biby iray no azo, amin'ity tranga ity saka, dia avy eo tsy raharahina. Tena ilaina tokoa izany alohan'ny hanapahan-kevitra hitondra trano volom-borona dia miresaha amin'ny fianakaviana mba tsy hipoitra ny olana any aoriana, raha tsy izany dia tsy ho mahafinaritra ho an'iza na iza ny fiaraha-miaina, farafaharatsiny ho an'ny saka.
Lohahevitra iray hafa tiako horesahina ny fitsidihana. Raha avelantsika hihidy ao anaty efitrano ny saka rehefa misy olona mahita antsika, ny zavatra tokana hotratrarintsika dia ny tsy fahatokisany olona. Araka izany, mila miaraka aminay araka izay tratra ianao mba hahatsapanao famporisihana sy fifaliana foana.
Ny Maine Coon amin'ny ankapobeny dia karazany salama ara-pahasalamana. Na izany aza, tsara ny hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby vaksiny ilaina, manala na mamono azy amin'ny taonan'ny 5-6 volana, ary ento hizaha azy matetika satria karazany afaka manana izany displasia hip.
Ohatrinona ny vidin'ny Maine Coon?
Te hiaina miaraka amin'i Maine Coon ve ianao? Ity 'goavambe' mahafinaritra ity dia biby iray izay tsy isalasalana fa hahatonga anao handany fotoana mampihomehy, ary ny hafa ho malemy paika. Saingy tsy maintsy tadidinao fa momba ny vidiny 900 euros raha mikasa ny hahazo azy io amin'ny hatchery ianao.
Raha te-hijery sary bebe kokoa an'ny Maine Coon ianao dia izao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Maine Coon
Ny fitondran-tenan'ilay zana-koditry ny tanora